FISAORANA - Miara-Manompo
HomeBlogEtudes de la bibleFISAORANA
« Tsy misy olona mahay mandray na inona na inona, raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany » Jaona 3:27
Loza ny ady hatao amin’Andriamanitra. Fampitsaharana amin’ny ady hatao amin’Andriamanitra ny fisaorana Azy. Rehefa mitsahatra ny ady hatao amin’Andriamanitra dia mitsahatra ny loza. Famerenana ny fiainantsika ho amin’ny fahasalamana.
✅Afaka amin’ny fiavonavonana sy fandokan-tena, hiverina amin’ny fisaorana
✳Mandokan-tena : eo anoloan’ny fahombiazana dia ny tenany no hitany. Alainy ho an’ny tenany ny voninahitra tokony ho an’Andriamanitra. Miady amin’Andriamanitra izany. Mety tsy nangalatra na mamono olona fa mandokatena.
✅Tsy salama ny fiainan’olona tsy tia misaotra an’Andriamanitra .Totohondry atefaka amin’ny tavan’Andriamanitra ny fandokafan-tena. Mamotika fiainana ny avonavona.Manasitrana ny fisaorana. Mizara misaotra amin’ny zavatra rehetra.Tsy manao fahadisoana Andriamanitra fa marina amin’ny hatao rehetra. Ny fitomboana amin’ny fahalalana an’Andriamanitra mampitombo antsika hahay hangina.
Sitrano amin’ny fisaorana ny fonao sy ny fiainanao .
✳Fanalahidin’ny fanasitranana fo sy fiainana ny fisaorana.
Fisaorana amin'ny finoana
"Koa lazaiko aminareo:Na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa…
[:fr]MITSANGANA HO AMIN'NY VONINAHITRA[:]
Fiangonana MIARAMANOMPO - 08 Mars 2019
Mahareta amin'ny fivavahana
"Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana" Kol 4:2 Sambatra ny olona miandry ny…